Sei pamusoro vakachengeteka nokuti mukuru akatasva yemagetsi sikuta? - Jomo Technology Co., Ltd
Zvino nemagetsi Scooters yazova nevakawanda sarudzo kuti yokufaranuka uye kugwinya. The vechidiki vakatasva ari yemagetsi nepakati sikuta , anogona kushandisa pachiyero uye dzepanguva mano, uye anogona kusimudzira kukura cerebellum uye pave pfungwa kukura, chiwedzere Moyo riparadzirwe. In muitiro akatasva yemagetsi nepakati puranga , nekuti iwe unofanira kuramba pakuenzanisa nechimwe chikamu tsandanyama muviri vachingotya zvikuru basa, hombe nepakati achishandisa sangano, kuva nehanya kwavo uye maitiro kumhanya, kuwedzera mukana wokushandiswa of muviri, kuvandudza utano kugwinya, chinogonesa ungwaru, saka kuzvida BALANCInG sikuta Bato inonziwo iri "dambanemazwi mutambo", anogona kushandira uye kuvandudza vechidiki nokushingaira, nechivimbo, yakazvimirira, simba, hasha unhu.
Kutanga kufunga kuchengeteka vakuru, riri kiyi kuwana kutsigira mhuri, uye yemagetsi anozvipira BALANCInG sikuta makatengera kana vakapfuura Ul 2272 advertising kana kwete, nekuti ichi chinoratidza yakachengeteka kwayo.
1. kuzviriritira BALANCInG hoverboard sangano kushandisa simba kudzora muviri nepakati mano, izvo zvinoita gumbo tsandanyama kuwanazve uye kuvandudza zvinokosha, panguva imwecheteyo, tsoka ndirwo rukuru pfungwa nhengo dzemuviri, uye nechepasi bwendefa rutsoka iri kukweshera kuramba inotokonya Self vakadengezera sikuta atasve, unogona kuwana acupoint dzishande, kuvandudza nhego chaitika.
2. Kuda muitiro, nokuda pakuenzanisa kuramba, zvinhu zvakasiyana-siyana tsandanyama nerongo muviri, unogona kuita bandauko, chiuno, gumbo, chiningoningo, musana uye dzimwe majoini ave munyoro. Kuti zvinobudirira kusimbisa gumbo basa, uye kuramba ayo kunzwisisa.
3. Long rokuti Kuda anogona kusimudzira pakuenzanisa uropi uye tsinga dzepanguva mano, anogona yekudyidzana kuvandudza hope, simba, azere vaduku simba, Anti kukwegura, zvinobudirira kudzivisa panowanikwa cheAlzheimer.
4. Electric Chiyero sikuta mitambo gym maturo, asi anogona zvinobudirira kudzora uremu hwako, kudzivirira kufutisa.
5. Electric Chiyero motokari kufamba haisi chete yaibatsira mitambo, kana ane kwezvokufuka nevamwe, unogona kuita shamwari itsva, kuti vaite zvakasiyana-siyana zvinoitwa, kupfumisa zviri upenyu, kubvisa uye kuderedza miitiro yakaipa.